कोरियनसंग विवाह गरेर प्रहरी अधिकृत सम्म भएकी नेपाली चेलीको कथा ! - Public 24Khabar
Home News कोरियनसंग विवाह गरेर प्रहरी अधिकृत सम्म भएकी नेपाली चेलीको कथा !
कोरियनसंग विवाह गरेर प्रहरी अधिकृत सम्म भएकी नेपाली चेलीको कथा !
विवाह मामिलामा नेपालजस्तै छ कोरिया । नेपालजस्तै यस अर्थमा कि वि’वाह व्या’क्तिगत छ’नौटभन्दा सामाजिक उत्तरदा’यित्वको रूपमा मानिन्छ ।वि’वाह गर्न पनि नेपालजस्तै शहरिया र धनाड्यलाई कोरियामा सहज छ ।
ग्रामीण कोरियालीलाई भने नेपाली ग्रामिण भेगका युवायुवतीजस्तो विवा’ह गर्न सहज छैन ।धेरै कोरियाली युवतीले वि’वाह गर्नै छाडेका छन् ।
अझ ग्रामीण क्षेत्रका युवासँग वि’वाह गर्ने विषय त झनै परको कुरा भयो । यहि स’मस्यालाई चि’र्न कोरियाली सरकारले सन् १९९० को दशकमा विदेशीसँग विवाह गर्न पाउने कानून ल्यायो ।
का’नूनसँगै धेरै विदेशी युवतीहरू कोरियालीसँग विवाह गरेर गए । यसरी वि’वाह गरेर जानेहरूले धेरै दुः’ख पाएको, या’त’ना भो’गेको जस्ता समाचारहरू धेरै समय चले ।
पछिल्लो समयमा केहि सकरात्मक समाचार पनि आउन थालेका छन् । कोरियाली भाषा नै नजानी त्यहाँका नागरिकसँग बि’हे गरेर गएका आ’प्रवासी श्रीमतिहरूको जीवनमा समेत परि’वर्तन आएको छ ।
तर, गृहिणीको रूपमा कोरिया प्रवेश गरेर कोरियाली प्र’हरी अधिकृत बन्नु र नेपाली अनि कोरियाली समुदायको पूल बन्नु सम्झनाका लागि ठूलो प’हिचान हो।
Previous articleटिकटकमा सबैभन्दा बढी रुचाइएकी मोडल करिश्मा ढकालको एकदमै रमाइलो टिकटक(हेर्नुस् भिडियो)
Next articleबिनिता कुमाल ए’क्का’सि हस्पिटलमा !डा’क्टरकै अगाडि डाक्टर बन्छु भनेर गरिन बाचा Binita kumal (भिडियो हेर्नुहोस)